Boldenone ntụ ntụ (846-48-0) hpllc >98% | AASraw
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Boldenone ntụ ntụ / Boldenone ntụ ntụ
SKU: 846-48-0. Categories: Boldenone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike site na gram ka usoro nchịkọta nke Boldenone ntụ (846-48-0), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa mmachi.
Boldenone ntụ ntụ , nke a makwaara dịka Δ1-testosterone, bụ steroid anabolic-androgenic synthetic (AAS) na-emepụta ihe na 1 (2) -n'elu mmiri nke testosterone. Boldenone n'onwe ya enwebeghị ahịa; dị ka ọgwụ ọgwụ, a na-eji ya dị ka boldenone undecylenate, ester undecylenate.
Boldenone ntụ ntụ video
Raw Boldenone ntụ ntụ bụ isi Characters
Molekụla Formula: C19H26O2
Ọbara arọ: 286.41
Raw Boldenone ntụ ntụ eji mee ihe na steroid steroid
Boldenone makwaara dị ka aha azụmahịa Equiposie, Ganabol, Equigan na Ultragn.
Raw Boldenone ntụ ntụ Usage
Ọ dịghị ihe na-erughị 400-600mg kwa izu, emela ka onyonyo dị elu karịa 600mg, n'ihi na ọ gaghị enwe uru ọ bụla ọzọ. Ogologo oge n'ogologo bụ 10-12weeks.
Ịdọ aka ná ntị na ụcha Boldenone ntụ ntụ
Ndị na-agba ọsọ ga-eme ya ụbọchị ọ bụla iji nọgide na-enwe ọkwá. Ọ bụrụ na enweghị ike ime nke a, mee ya ọ dịkarịa ala otu ugboro kwa izu.
Site n'otu ebe ahụ, ma ọ bụrụ na a na-emegharị mkpịsị elu dị elu ugboro ugboro, enweghi ike ịchọta mmanụ. Ọ ga-agbasasịkwa onwe ya ma n'ọnọdụ kasị njọ ọ pụrụ ịwa ahụ. Ya mere, onye ọrụ kwesịrị ilekọta saịtị injuectiong. Nke a bụ eziokwu maka ọtụtụ ndị ọzọ steroid.
Raw Boldenone ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Boldenone ntụ ntụ si AASraw